Rag wax yar tare mooyee waxma tare Malaha UAE Ragii shalay ka cabaadayay maantay Noo garaabeen.W.Q Kaptanka
Friday, 25 May 2018 11:49
Xikmad reer Somaliland waxay ku maahmaahan Rag waxyar tare mooyee waxma tare Malaha shaqsi aad macaamil fiican lasamayso Aya loo aayaa macdalaa waa dowlad dhan oo qani ah. Cidkasta oo waddankeena maalgashataa faa'ido ayaynu ku qabnaa. Maanta waa markhaati madoon in aynu helay saxibo aan wax Wada qabsankaro sida UAE waa hadii aan ka faa'idaysano si bilaa musuq ah.
27sano waa markii koowaad ee dowlad caalamiya sida UAE inoo Soo gurmato waa wax Lagu farxo gurmadka dadkeena dhibaataysan jidkii ayaa xidhmay awood aynu wax ku gaadhsiino maynaan helneen hadii aan ilaahay inoogu gargaarin diyaaradaha qumaatiga u duula ee UAE. Somaliland shacab Iyo xukuumad Iyo xisbiyo waxaa inagu waajiba inaan ugurmano walaheena masiibadu haleeshay oo aynan waxba Kala hadhin inagoo aan cidna ku halaynayn.
Xukuumadu ha laba jibaarto dedaalkooda shacabkuna fadhiga haka kaco oo haloo gurmado walaaheena gadoonsan bawdyo rag maalinba mid baa qaawan shalay markii abaartu ku dhufatay bariga dadka galbeedku gurmad wayn ayay galeen dadkii kusoo qaxayna sifiican ayay ugu gurmadeen oo usoo dhaweeyeen sida darteed sidii caadada inoo ahayd aan u gurmano cida maalinba jilicsan si naxariista Allah aan u kasbano.
Waxaan deganay meel ujirta madarka Hargeisa sadex kilometres waxaan aad ugu diirsaday diyaaradaha qumaatiga ukaca ee C3 oo laba dhigaya gargaarka dadka baahan aad baan ugu diirsaday gurmadka UAE ay Inala soo gaadheen waana mid aanu abaal ugu hayno waxbadana waanu Wada qabsan mustaqbalka labada dowladood ee UAE Iyo Somaliland.
Waxaan ugu danbayntii ku guubaabinayaa shacabka reer Somaliland cidii aan waxkale untaraynin dadkeena dhibaataysan aan ducada la ogaano waa bishii khayraade. Waxan tacsi Tiiraanyo Leh u dhirayaa dhamaan dadkii kuwaayay dadkoodii ay jeclaayeen Mashaqadan Iyo maalkoodiiba in ilahay wa bil barakaysan e Samir Iyo imaan kasiiyo aamiin yaa Rabbi.
More in this category: « Kani waa qorshe Somalia iyo Djabuuti ku Sandulaynaya Aqoonsiga S/land ama ka dhigi kara S/land Ra’isal-wasaraha Ethiopia !! Dr.khadar-Libaaxley Geopolitical Change, a Rising Hegemon, and Berbera Port Deal »